Filtrer les éléments par date : mardi, 21 janvier 2020
Miteraka fahatapahan’ny lalam-pirenena faha-13 ny fihotsahan'ny làlana lehibe eo amin'ny PK114+800 miazo an’i Betroka.
Mijery ny hametrahana haingana làlana vonjy maika vaovao hiverenan’ny fifamoivoizana ny Talem-paritra Atsimo Andrefana eto amin'ny Ministeran'ny Fanajariana ny Tany, ny Toeram-ponenana sy ny Asa Vaventy sy ny mpiara-miasa aminy.
mardi, 21 janvier 2020 12:47
Tapaka vonjimaika ny lalam-pirenena faha-4, eo Befotoana Ankarafantsika - PK 480, noho ny fihotsahan'ny fasika eo ambony arabe.
Mifarimbona manala ny fasika manakana ny làlana ny Talem-paritry ny asa vaventy Boeny, ny Prefen’i Boeny, ny Zandarimaria sy ny BNGRC Boeny miaraka amin'ny Fokonolona mba hiverenan'ny fifamoivoizana haingana.
mardi, 21 janvier 2020 09:29
Andro ratsy: Tsy mianatra ny mpianatra, tsy mahazo miandriaka manerana an’i Boeny
Voasokajy ho faritra mena noho ilay andro ratsy mitondra oram-be sy tafio-drivotra ny faritra Boeny. Nandray fepetra ireo solontenam-panjakana manoloana izany, nampiato ny fampianarana manerana ny DRENETP Boeny manomboka anio, ary tsy mahazo miandrika ihany koa ireo mpampiasa ranomasina.
mardi, 21 janvier 2020 09:23
Harifidy Ramanandraibe: Nohadihadiana teny amin’ny Toby Ratsimandrava
Nahazo fiantsoana avy amin’ny Brigade Criminelle Spéciale eo anivon’ny Zandarimaria Toby Ratsimandrava i Harifidy Ramanandraibe, mpanao gazety mpamakafaka politika ao amin’ny haino aman-jery tsy miankina i-BC Antananarivo.
Raharaha fitoriana momba tany eny Nanisana no nihainoana azy, ary afaka namonjy fodiana izy taorian’izay.
Fanindroana izao i Harifidy Ramanandraibe natao fanadihadiana, tato anatin’ny roa herinandro izay. Tamin’ny voalohany dia mahakasika ny fanahiana ho manafina fitaovam-piadiana no antony nisavàna ny tranony sy nanaovana fanadihadiana azy teny anivon’ny BC Polisim-pirenena Anosy, ny alahady 12 janaory 2019.
mardi, 21 janvier 2020 09:22